Ogaden News Agency (ONA) – Weerar qorshaysan oo ka dhacay Falfal
Weerar qorshaysan oo ka dhacay Falfal
Posted by ONA Admin	/ June 26, 2011
War dagdag ah oon goordhoweyd naga soo gaadhay Qaabta Duufaan ee CWXO waxaay ku sheegeen in shalay aroornimadii uu dagaal xoogan ka dhacay meesha loo yaqaano Falfal oo Dhagaxbuur u jirta qiyaastii 25 KM.
Falfal ayaa xukuumadii Dergiga ahaan jirtay xerada ugu weyn ee tababarka ciidanka gumaysiga qaybta Hararghe. Wuxuu noo sheegay Naftiihuraha in xeel dagaal oo aad u cilmiyaysan loo dhigay ciidankii gumaysiga halkaa ka joogay iaydoo markii hore loo diray ciidan tira yar oo ku soo ridey xabado ka dibna ka soo yaacey. Ciidankii Wayaanaha oo weerar dabagal ah soo qaaday ayaa dhexda u galey sidii loogu talagalay ciidankii Jabhadda oo ku sugaya halkaa.
Dagaalkan oon faafahin dheeraad ah aan ka sugayno xarunta dhexe, wuxuu noo sheegay naftiihuraha in khasaare ay abid ka sheekeyn doonaan uu halkaa ku qabsaday.
Wuxuu intaa noo raaciyay inay dagaal badan ay qaadeen qaybtooda iyo qaybaha kaleba isla markaana uu cadawga khal-khal weyn ka muuqdo iyo dib u gurasho aan habaysnayn.
maansha allaah guul ayaan leeyahay waxa aan halkan ka salaamayaa dhamaan naftood hurayaasha jwxo ee naftooda noo huray ayaan waxa aan leeyahay idinma aanan iloobin waan idinla jiraa maanka iyo maskaxda ayaan idin kala jiraaaaa guulaysta guulana ha idin la jiro